Ulwazi olubalulekileyo malunga nokubhala ghost. Ipapernerds
Umbhali akakwazi ukuqala ukubhala ithisisi de kube intlawulo ifunyenwe. Ngaphambi koko, ayinakuqalwa.
Malunga nababhali bethu
Nabani na ongumbhali kunye nathi sele eyigqibile inkqubo yesicelo kwaye wamkelekile. Njengombhali kunokwenzeka ukuba uthathe inxaxheba
Isiqinisekiso somgangatho wePapernerds
Ukuba unenkxalabo malunga nokuba itemplate yakho ibhalwe ngumntu osisiporho, singathanda ukuthatha amanqaku ngoku
Amaxabiso acatshulweyo abhekisa kwixesha lokuhanjiswa kwiveki e-1 emva kokufunyanwa kwentlawulo. Umzekelo, ukuba unomsebenzi kwi-
«Buyela umva Seita1 Seita2 Seita3 Ngaphambili "